ချစ်ခင်ရပါသော AT&T U-Verse | Martech Zone
ချစ်ခင်ရပါသော AT&T U-Verse
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါသည်သင်တို့၏ဖောက်သည်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အိမ်မှဖုန်းနှင့် DSL နှစ်ခုလုံးသည်သင့်မှတစ်ဆင့် (ယခင်က SBC) တွင်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ သို့သော် DSL ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၌ရှိသော TV ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်ကိုရယူလိုသည်။ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်း၊ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းမှာအခြေခံအထုပ်တစ်ခုသာရှိပြီးအဆင့်မြှင့်တင်ချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းသင်ပို့လွှတ်ခဲ့သည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုက်ရိုက်မေးလ် ငါ upgrade လုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာ။ သူတို့ကိုငါတစ်လတစ်ကြိမ်လောက်ကောင်းကောင်းအကြောင်းကြားပြီးငါ့တိုက်ခန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ တစ်လတွင် DSL နှင့် Television နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် packets အားလုံးကိုဖော်ပြသည့်အရောင်ပြည့်စာအုပ်ကိုပင်သင်ပို့ခဲ့သည်။ မင်းငါ့ကိုရပြီ ... ငါရောင်းလိုက်ပြီ! တနင်္ဂနွေနေ့တွေတောက်ပနေတဲ့ Colts အနိုင်ရဖို့ငါ U-Verse ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လိုတယ်။
ဒါကမင်းကိုပြတာပဲ ... ဟုတ်တယ်၊ ငါအဆင်သင့်ပဲ။
ဒါကြောင့်ငါသွားရောက်လည်ပတ် AT & T.com နှင့် Upgrade Now ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Doh! ရရှိနိုင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်ပထမ ငါသိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် # ၁၃၂၄ မှာရှိတဲ့ငါ့အိမ်နီးချင်းတစ်နှစ်ကျော်ကြာသူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့လို့ပဲ။ ဒါကတတိယဇာတ်လမ်းပဲ။ ဒုတိယဇာတ်လမ်းကိုပေါ့။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတင်ပြသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ Dear AT&T, ခင်ဗျားဘာကြောင့်မနှစ်ကငါ့လိပ်စာကိုကြော်ငြာတွေပို့ခဲ့တာလဲ။ တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ငါနင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့တောင်းဆိုတာလား (မသိဘူးဆိုတာမသိဘူး) ။ သင်သည်ဤအဆက်မပြတ်သောတိုက်ရိုက်စာပို့ရန်ပိုက်ဆံအတော်အတန်သုံးစွဲခဲ့သည်။ …
အိုး ... ကောင်းပြီ ... ငါနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုယူရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ Chat Online ကိုနှိပ်ပါ ယခု သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှု။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ၁၅ ယောက်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကို drop နိုင်ထင်ပါတယ် ယခု။ ငါပြတင်းပေါက်အနီးကပ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အစားခေါ်ဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်။
ဖုန်းသည်အလိုအလျောက်အသံဖြင့်ဖြေပြီးကျွန်ုပ်၏အကောင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ငါလုပ်တယ် ပြီးတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမေးတယ်။ “ U-Verse” လို့ခေါ်တဲ့“ U-Verse” လို့ခေါ်တဲ့ဂရုတစိုက်ပြောတာကသေချာတယ်။ မသွားပါနဲ့။ “ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုနားမလည်ဘူး။ ” အခုငါနည်းနည်းစိတ်ပျက်လာပြီ။ အလုပ်ဖြစ်တယ် "U-Verse မှအဆင့်မြှင့်" ... ။
ငါအဆင့်မြှင့်တင်မရနိုင်သည်ဟုစနစ်ကပြောပြသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ကျောချိန်ခွင်လျှာတစ်မျိုးပေးရသည်။ ဒါဆိုဖုန်းနံပါတ်တွေအားလုံးကိုရိုက်ပြီးအကြွေးဝယ်ကဒ်နဲ့ဖုန်းကိုပေးလိုက်တယ်။ ငါ ၀ င်ရောက်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အားမပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိလိုသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Shannah နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ငါနှင့်သူမစိတ်ကူးပါတယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့က Colt အကြောင်းသူတော်စင်များကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းအနည်းငယ်သောဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည် သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းက Bears ပန်ကာဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ငါ "သူတို့ NFL ၌နေဆဲလား" မေးတယ်။ သူမသည်ကြောင်းထဲက chuckle တယ်။ သူမသည်သူမ၏စနစ်ကဖြစ်စေမရရှိနိုင်ကပြောပါတယ်ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ကျွန်ုပ်အိမ်နီးချင်း၌ရှိကြောင်းသူမကသူတို့၏လိပ်စာကိုမေးသည်။ ငါတိုက်ခန်းထဲကနေလှေကားတက်ပြေးနှင့်နံပါတ်ရရန်ရှိသည်။ ငါပြန်ဆင်းပြေးနှင့်သူမ၏ # 1324 ပြောပြပါ။
သူမသည် ဆက်လက်၍ သူမတိုးတက်နေသည်ဟုထင်နေသည်။ ငါတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ထိုအခါခေါ်ဆိုမှုကျဆင်းသွားသည်။
ဘယ်သူမှပြန်မခေါ်ကြဘူး။ ဒီစနစ်ကငါ့နံပါတ်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ငါရှာနန်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အခုတော့ Shannah ကိုကိုင်ဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူးထင်တယ်။ အော်ပရေတာကိုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ဆိုရန်ကြိုးစားသော်လည်းယခုမူစောင့်ဆိုင်းနေပြန်သည်။
ဒါကြောင့် ... ငါ website ကိုနောက်တဖန်ငါအီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေရှိ Contact Us ကိုနှိပ်ပြီး“ Upgrade to U-Verse” လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအီးမေးလ်ရွေးစရာစုံစုံလင်လင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တင်သွင်းပြီးစာမျက်နှာကိုပြန်လည်ဖွင့်သည်။ ပထမဆုံးအီးမေးလ် option ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ အီးမေးလ်လိပ်စာဒါမှမဟုတ်ပုံစံအစား U-Verse ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလင့်ခ်တစ်ခုပေးတယ်။ ဒါကငါမှာပြီးသားခဲ့ site ကိုပါပဲ။
သင်၏အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များမည်မျှလွယ်ကူသည်၊ ခက်ခဲသည်ကိုသိရှိရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အသုံးပြုသူကိုစမ်းသပ်ခြင်းပြုခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ အခြား ၀ ယ်ယူသူရာပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသည်သင်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိုမိုပေးဆပ်ရန်နှင့်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည် - သို့သော်မပေးနိုင်ပါ။
အဲဒီမှာ AT&T ရှိတယ်။ ငါသည်သူတို့၏အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုသူ (ယခင်) ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါငွေတောင်းခံတယ်၊ ပိုက်ဆံရတယ်၊ နှစ်နှစ်လောက်ရောင်းဖို့မင်းကိုရောင်းခဲ့တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုတကယ်အဆင့်မြှင့်ချင်ကြသလော သင်ပြုလုပ်ပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အဆင်မပြေပါ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းမှာအဆင်မပြေပါ၊ သင့်စနစ်သည်မတိကျပါ၊ သင်၏ဖုန်းစနစ်သည် (ကျွန်ုပ်ထူးဆန်းသည်) ကျွန်ုပ်၏ခေါ်ဆိုမှုကိုကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
Tags: အားလပ်ရက်စျေးဝယ်redtirectmultivariate စမ်းသပ်ခြင်းသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့strip ဖိုင်တွဲလက်ဆောင်ပေးမယ်WordPress
ကောင်းမွန်သောသဒ္ဒါနှင့် Blogging တွင်ပုဒ်ဖြတ်ခြင်း၏အရေးပါမှု
6:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 36
ငါ u- ကျမ်းပိုဒ်နှင့်အတူတူပင်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ် ငါအရမ်းဆိုးချင်တယ်။ ငါအီးမေးလ်များနှင့်ပင်အကြောင်းကို telemarketing ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏inရိယာတွင်ဝန်ဆောင်မှုမရရှိပါ။ အားလုံးခြုံကြည့်ရင်တော့သူတို့ဖောက်သည်တွေကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရတာအရမ်းမကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။
ဧပြီ 30, 2011 မှာ 6: 27 pm တွင်
ဒါကကျိန်းသေတူသောအသံ။ သင်ရှာဖွေနေသည့်အဆင့်မြှင့်မှုကိုသင်ရရှိခဲ့သလား။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်ငါ့ DISH ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကပ်လိမ့်မယ်။ ငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကလည်းကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ DISH သည် HD အတွက်လိုင်းများပိုများနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောသူများထက်ဘ ၀ အတွက်အခမဲ့ HD ကဲ့သို့သောအပေးအယူများနှင့်အတူရှိနေသည်။ ထို့အပြင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဥပမာအားဖြင့်လည်းစဉ်းစားရန်အခြားအရာများရှိပါသည်။ သင်၏ဖျော်ဖြေရေး / ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှရရှိသောအခါပြတ်တောက်သွားပါက၎င်းတို့အားလုံးပြုလုပ်ကြသည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှမတော်တဆမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။